घटनाका नाइके भनिएका दुर्गेशले श्रीमती र छोरा सँगै लिएर पललाई भेटे, ३० मिनेट कुराकानी ! – Sandes Post
May 4, 2022 421
पर्फमर दुर्गेश थापा र कारा’गारमा रहेका अभिनेता पल शाहबीच भेट भएको छ। थापाले का’रागारमै पुगेर बला’त्कार आरोपी अभिनेता पल शाहलाई भेटेका हुन्।
थापा आफ्नी श्रीमती र छोरालाई समेत लिएर जिल्ला कारा’गार कार्यालय तनहुँमा पुगेका थिए। आइतबार उनीहरुबीच करिब ३० मिनेट कुराकानी भएको थियो।
पल र दुर्गेश पहिले असल मित्र भए पनि उनीहरुबीच मनमुटाव छ। दुर्गेशले नै ना’बालिग गायिकालाई उक्सा’एर पलविरु’द्ध ब’लात्कार सम्बन्धि उजु’री दिएको बताइएको छ। पल स्वयम्ले दुर्गेशसहितका केही साथीहरुले आफूविरु’द्ध षडय’न्त्र गरेको भन्दै भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए।
तर, पछिल्लो समय पल शाह प्रकरणमा ट्वीस्ट आएको छ। जिल्ला अदालत तनहुँमा ना’बालिग गायिका र उनका पिताले बयान फेरेसँगै यो प्रकरणमा ट्वीस्ट आएको हो। दुर्गेशले पनि अदालतमा पललाई सहयोग पुग्ने गरी बयान दिएको बताइएको छ। यसै बेला उनीहरुबीच भेट भएको हो।
गीतिसंग्रह निकाल्नु अत्यान्तै दुर्लभ भएको अवस्थामा आधुनिक गीतिसंग्रह ‘खुशीको खुराक’ सार्वजनिक गरिएको छ। गीतकार वीरेन्द्र पाठकको रचना एवं संगीतकार प्राज्ञ सुनिल मास्केको संगीत रहेको गीतिसंग्रहमा ६ गीत समावेश छन्।
राजधानीस्थित इमेज एफएममा एक कार्यक्रमकाबीच गीतकार पाठक, संगीतकार मास्के, सञ्चारकर्मीहरु नरेश भट्टराई, कृष्ण आचार्य र सुमन बैरागीले गीतिसंग्रह सार्वजनिक गरेका हुन्। गीतिसंग्रहमा चर्चित गायक–गायिकाले स्वर दिएका छन्।
मिलन नेवारको स्वर तथा प्रदीप श्रेष्ठको संगीत संयोजनमा ‘मनपर्ने मायालाई’, राज सिग्देलको स्वर तथा रिकेश गुरुङको संगीत संयोजनमा ‘खुशीको खुराक’, विश्व नेपालीको स्वर तथा प्रदीप नेपालीको संगीत संयोजनमा ‘मन पर्ने मायालाई’ बोलका गीतहरु गीतिसंग्रहमा समावेश छन्।
त्यस्तै, शिव परियारको स्वर तथा दिक्षित पौडेलको संगीत संयोजनमा ‘कहिले मन पर्यो’, रचना रिमालको स्वर तथा प्रदीप श्रेष्ठको संगीत संयोजनमा ‘आँधिबेहरीले उडायो’ गीत गीतिसंग्रहमा समावेश गरिएको छ भने सुरेश लामाको स्वर तथा दिक्षित पौडेलको संगीत संयोजनमा ‘केश कोर्या’बोलको गीत पनि गीतिसंग्रहमा समावेश छ।
६ गीतमध्ये मिलन नेवारले स्वर दिएको ‘मनपर्ने मायालाई’को भिडियो समेत तयार भएको छ। युवराज वाइबाको निर्देशन, सञ्चारकर्मी नरेश भट्टराई र मोडल उषा उप्रेतीको अभिनय रहेको भिडियो केही दिनमा सार्वजनिक गरिने जनाईएको छ।
राजेश श्रेष्ठ रेकर्डिष्ट रहेको गीतिसंग्रहमा किशोर थापाको मिक्सिङ एवं माष्टरिङ रहेको छ। गीतिसंग्रहलाई शुभकामना मिडिया शोलुसन प्रा।लि।ले बजारमा ल्याएको हो। गीतिसंग्रहमा समेटिएका गीतमा शब्द, संगीत तथा स्वर सबैपक्ष राम्रो रहेकाले स्रोताको मन जित्ने विश्वास गरिएको छ।
Prevरवि लामिछानेसम्मको साथ पाएका बालेनलाई चुनावको मुखैमा आफ्नैबाट धोका, लाग्यो नमिठो धक्का !
Nextचर्चामा रुसी राष्ट्रपति पुटिनकी ३१ बर्ष कान्छि ‘गर्लफ्रेण्ड’, को हुन् यी सुन्दरी ?